Ny fitsaboana ny fahatakarana amin'ny aphasia - fiofanana kognitive
Ianao izao: Home » Articles » aphasia » Ny fitsaboana ny fahatakarana amin'ny aphasia
Ity lohahevitra ity dia voarakitra ao amin'ny fampianarana video "Ny fitsaboana aphasia" izay azo vidiana eto amin'ny 65 €.
Amin'ny ankapobeny, misy fomba roa lehibe amin'ny fitsaboana ny fahatakarana aoaphasia:
Fitsaboana mifototra amin'ny karazana ny aphasia
Fitsaboana mifototra amin'ny haavon'ny fahasimbana
Raha ny momba ny karazana fitsaboana voalohany dia fantatray fa misy ny protokoleta manokana. Ohatra, mikasika ny aphasia manerantany, Marshall (1986) dia namorona andiany dingana efatra hahatratrarana valiny sahaza:
Mangataha valiny (na dia tsy am-bava aza)
Amporisiho ny valiny hafa
Mangataha valiny mety
Mangataha valiny marina
Raha ny momba izany Aphasia an'i Wernicke, misy protokol manokana toy ny TWA (Helm-Estabrooks sy ny mpiara-miasa aminy). Amin'ny ankapobeny, ny fitsaboana aphasias any aoriana, izay manana fahasembanana ambony kokoa, dia mifototra amin'ny fanekena ireo fanentanana am-bava, amin'ny fahazoana ireo teny mitoka-monina, amin'ny fihenan'ny fikirizana ary amin'ny fanaraha-maso ny tena.
Raha toa kaAfhasia an'i Brocaetsy ankilany, ny fitsaboana ny fahatakarana matetika dia maka seza aoriana. Na izany aza, ny fahaiza-mahatakatra dia tokony hadihadiana foana, ohatra, fehezanteny tsy kanona sy azo hamarinina.
Ny fitsaboana miorina amin'ny ambaratonga dia manandrana mamaky ny fahatakarana ho singa ao aminy (manomboka amin'ny fidirana an-tsofina ka hatramin'ny fahatakarana ny resaka) mba hanadihadiana haavon'ny fahasimbana. Ny hetsika sasany, miankina amin'ny ambaratonga tafiditra amin'izany, dia mety:
Fanavakavahana ny vaninteny sy ny teny
Phoneme-grapheme, sary-sary, teny-teny, sary-sary mifandraika semantika, fikambanana famaritana teny
Fitsaboana simika madio (ohatra, ny Fandinihana momba ny endri-javatra semantik)
Fitsarana ny synonymy
Eny / tsia fanontaniana ary miaraka amin'ireo mpanelingelina.
Na inona na inona tranga manokana dia ilaina ny mitadidy fa:
Ny fahatakarana ny fikorontanana dia mipoitra avy hatrany ao amin'ny dingana maranitra ary amin'ny tranga maro dia mazàna mihena tampoka, na dia amin'ny volana voalohany aza.
Matetika izy io dia mifandray amin'ny anosognosia (tsy fahafantarana ny aretina)
Izy io dia azo ampifandraisina aretin-tsaina
Azonao atao ny misafidy ny miasa miankina amin'ny karazana aphasia na ny haavon'ny fahasimbana
Misy teny lakile roa: famerimberenana sy fanaraha-maso ny tena
aphasia, fahazoana aphasia, inona no atao raha mahatakatra aphasia, fahatakarana ny famerenana amin'ny laoniny aphasia, fitsaboana aphasia
Ny fitsaboana ny fahatakarana amin'ny aphasia2020-12-112020-12-28http://www.trainingcognitivo.it/wp-content/uploads/2017/08/nuovologo_87e9aa904327d53301f73f9191e17e49.pngFiofanana aretin-tsainahttps://www.trainingcognitivo.it/wp-content/uploads/2020/12/head-2428333_1280.png200px200px
Fahasarotana aphasia sy famakiana azo: ny fanampian'ny teknolojia vaovaoaphasia